MR MRT: Samohacittam samohacittanti pajanati - သမောဟစိတ္တံ သမောဟစိတ္တန္တိ ပဇာနာတိ
Samohacittam samohacittanti pajanati - သမောဟစိတ္တံ သမောဟစိတ္တန္တိ ပဇာနာတိ
“၀ိပဿနာ ရှုတော့ရှုတယ် ဘုရား . . . ဘာမှမတွေ့ဘူး။” ဒါနဲ့ ဆင်ခြေကိုင်တာပဲ။ ဒီစိတ်ကလေးက ကြည့်တော့ကြည့်တယ်။ ဘာမှတွေ့ဘူး။ ဒါဆိုရင် မတွေ့တဲ့ စိတ်ကိုပဲ ပြန်ကြည့်။ ဘာမှ မတွေ့တဲ့ စိတ်ကလေးက မတွေ့တာနဲ့ပဲ အနိစ္စရောက်သွားတာ။ မတွေ့တဲ့ စိတ်ကလေးကို ဉာဏ်နဲ့ နောက်က ကြည့်ပေးပါ။ မသိတဲ့ စိတ်ကလေး သက်တမ်းကုန်သွားတယ်။ သက်တမ်းကုန်သွားတာလေးကိုသာ သိအောင်ကြည့်။ သက်တမ်းကုန်သွားတာလေးက “အနိစ္စ”။ သက်တမ်းကုန်မှန်း သိလိုက်တာလေးက “မဂ္ဂ”။ ၀ိပဿနာ မရှုတတ်ဘူးဘုရား . . . ဆိုရင် မရှုတတ်တဲ့စိတ်ကိုရှု။
အောင်မာ . . . အတော်ဆန်းတဲ့ စကားပါလားလို့ ခင်များတို့က အောက်မေ့ချင် အောက်မေ့နေမယ်။ ဦးဝင်းတို့ ဦးဘအုံးတို့ ဆန်းသလား . . .တဲ့။ ရိုးရာပဲလား။ (ရိုးရာပါ ဘုရား။)
သို့သော် ခင်များတို့က ၀ိပဿနာ တွေ့ရက်နဲ့ ၀ိပဿနာ မရှာတတ်လို့ သင်ရတာပါ။ ရှုစရာအာရုံ ပေါ်လာရက်သားနဲ့ ခင်များတို့က မရှုတတ်ဘူး ပြောနေလို့။ ရှေ့သာ ရှာနေတယ်၊ ကိုယ်ရှာတာ ပျက်တာ မသိဘူး။ ၀ိပဿနာ ရှာပြီဆိုရင် ရှုစရာကို ရှာမတွေ့တဲ့စိတ် လာတတ်တယ်။ အဲဒီ လာတဲ့စိတ်ကို နောက်ဉာဏ်က ရှုပေး။ ရှုလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ နောက်ဉာဏ်ဝင်လာရင်ပဲ သူ ရှိသေးလား။ (မရှိတော့ပါဘုရား။) မရှိတော့ “အနိစ္စ”။ မရှိတာကို သိတာက “မဂ္ဂ”။
ဒါ ဘာရှုတာတုန်း မေးတော့၊ ဘယ်စိတ်ရှုတာပါတုန်း မေးတော့မှ “သမောဟစိတ္တံ သမောဟစိတ္တန္တိ ပဇာနာတိ” အလုပ်ခိုင်းတာ ဆရာဘုန်းကြီးက။ သဘောပါကြပြီလား။ (မှန်ပါဘုရား။) ရှုလို့ ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုတာ မောဟစိတ် ပေါ်နေတာ။ အဲဒီ မောဟစိတ်ကလေးကိုပဲ ဘုန်းကြီးတို့က တစ်ခါတည်း ၀ိပဿနာအာရုံ လုပ်ပစ်လိုက်တာ။ သူ ရှေ့ရှာလို့သာ မတွေ့တယ် သူသေတာ ကျုပ်တို့က တွေ့တယ်။ ရှင်းပြီလား။ (မှန်ပါ။)
ဘာ နုပဿနာ ဖြစ်သွားတုန်းမေးတော့ “စိတ္တာနုပဿနာ” ဖြစ်သွားတယ်၊ “ဓမ္မာနုပဿနာ” ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ စိတ်ကလေး ချုပ်ပျက်သွားတာသိရင် “စိတ္တာနုပဿနာ”။ စိတ်ကလေး ဒုက္ခရောက်သွားတာသိရင် “ဓမ္မာနုပဿနာ”။ ကဲ အကုန်ပါမသွားဘူးလား။ (ပါပါတယ် ဘုရား။) ရှင်းကြရဲ့လား။ (ရှင်းပါတယ် ဘုရား)။ ၀ိပဿနာ ရှုတတ်ပြီလား။ (ရှုတတ်ပါပြီ ဘုရား။)
ခင်းများတို့ ဆေးတွေ့ရက်သားနဲ့ မစားတတ်လို့ ခက်သွားတာကိုး။ ဆေးတွေ့ရက်သားနဲ့ မစားတတ်လို့ ခက်သွားတာ ဆိုတော့ . . . မင်းတုန်းမင်းကြီး လက်ထက်က။ ရာဇ၀င်တွေဘာတွေ ဖတ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင် သမားတော် ဆရာပိုဆိုတာ ကြားဖူးမှာပေါ့။ ဆရာပို ဆိုတာက အမရပူရက။ နန်းတော်သွားတော့ လူတစ်ယောက် သခွားသီးတောင်းနဲ့ ဇရပ်ပေါ် ထိုးအိပ်နေတာတွေ့ . . .။ ဆရာပိုက တပည့်တွေနဲ့လာ။ ဟ ဟိုလူ ကြည့်ကြပါအုံးကွ ဘာများ ဖြစ်နေတုန်း။ ထိုးအိပ်နေရှာတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာလည်း မသက်သာဘူး ထင်တယ်။ သွားမေးစမ်း တပည့်တွေဆို သွားမေးတော့ ဒကာဒကာမတို့ . . . လေနာထတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အော် . . . မသိတော့ သိပ်ခက်တာပဲဟေ့ . . . ဆိုပြီးသကာလ သူထမ်းလာတဲ့သခွားသီး ကျွေးလိုက်စမ်းပါကွာ ခွဲပြီးတော့။ လေအားနည်းလို့ နာနေတာ သခွားသီးက လေ ဖြည့်ပေးလိုက်တော့ သူ ခဏလေးပဲ လေနာပျောက်ပြီး သူ့အထမ်းသူ ထမ်းသွားတာပဲ။
သဘောကျပြီလား။ (မှန်ပါ့။) ဘာဖြစ်လို့တုန်း။ ဒီမှာ ဆေးပါရက်သားနဲ့ မသောက်မိဘူး။ ဒါကြောင့် သူ လေနာခံရရှာတာ။ ဆေးတွေတော့ သူထမ်းလာတာပဲ။ အင်း . . . သူထမ်းပြီး သူပဲ လေနာထနေတယ်။ ဒီ့ပြင်ဆေး ရှာရအုံးတော့မလို ကျမနေဘူးလား မသိတဲ့လူအတွက်က။ (ကျပါတယ်ဘုရား။)
အဲ . . . ခင်းများတို့ ရှုတော့ ရှုတယ်ဘုရား . . . ဘာမှ မတွေ့ဘူး ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် အဲဒီ ဘာမှ မတွေ့တဲ့ဥစ္စာဟာ ခင်များတို့၏ နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ ဆေးပဲ။ မတွေ့တဲ့ စိတ်ကလေးကို ဉာဏ်နဲ့ ရှုလိုက်တော့ မတွေ့တဲ့စိတ်က “အနိစ္စ”။ ရှုတာက “မဂ္ဂ”။ မဖြစ်ဘူးလား။ (ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။) အဲဒီတော့ ခင်များတို့သည် . . . “၀ိပဿနာအစ မတွေ့တဲ့စိတ်က”သာ မှတ်ပေတော့ . . .။
Ref (25 May 2011):
“၀ိပဿနာအစ မတွေ့တဲ့စိတ်က စရပုံ အလုပ်ပေးတရား”၊ အလုပ်ပေးတရားတော် အမှတ် (၂)၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်
Posted by Ashin Acara. at 10:15 PM
Labels: 01B. Classic - ဂန္ထ၀င်